Miditra ny maitsoahitra : misy mihoatra ny 2.000 Ar ny kilaon’ny vary | NewsMada
Tapitra ny ririnina! Fotoana hanombohan’ny hafanana izao sady manomboka mihena koa ny famatsiam-bary eny an-tsena, ao anatin’ilay antsoina hoe maitsoahitra. Miaka-bidy ny vary, indrindra any amin’ny toerana lavitra sy tsy mamoka-bary. Araka ny loharanom-baovao, misy tanàna, efa mihoatra ny 2.000 Ar ny kilaon’ny vary. Tafakatra 2.800 Ar/kg ny vidim-bary any anelanelan’i Vangaindrano sy Taolagnaro, ary 800 Ar ny vidin’ny iray kapoaka. Ao an-tampo-tanànan’i Taolagnaro, manodidina ny 1.925 Ar ny kilao raha 550 Ar ny kapoaka.
Raha ny tatitry ny Masoivohon’ny vary na “Observatoire du riz” (ODR) farany teo (22-28 aogositra 2016), niakatra avokoa ny vidim-bary any amin’ny renivohi-paritany sy ny tanàn-dehibe raha noharina ny vidiny ny taona 2014 (tsy nahavita fanadihadiana ny ODR ny taona 2015). Nisondrotra 30% ny vidim-bary any Antsiranana I, niakatra 24% ny tao amin’ny boriboritany fahefatra eto an-dRenivohitra, +20% ny any Mahajanga an-tampo-tanàna ary niakatra 14% any Antsirabe sy 13% any Toamasina. Mora indrindra amin’ny vary avy eto an-toerana ny any Toamasina (1.300 Ar/kg) raha lafo indrindra ny any Ambovombe Androy (1.575 Ar/kg).
Tafakatra 4.800 Ar ny litatry ny menaka
Tsy nanana tarehimarika mampitaha ny fiovaovan’ny vidin-javatra ilaina andavanandro (PPN) ny ODR. Mora indrindra ny kilaon’ny siramamy any Antsiranana (2.100 Ar) raha lafo indrindra any Androy (3.000 Ar). Ho an’ny menaka, 3.500 Ar ny litatry ny tsy anaty tavoahangy (en vrac) any Boeny, raha 4.800 Ar ny any Vakinankaratra sy Ihorombe.
Tsy feno ny antontam-baovao ananan’ny ODR. Faritra 12 amin’ny 22 no nahazoany antontanisa amin’ny vidim-bary ary sivy ho an’ny vidin’ny PPN, toy ny menaka, siramamy, lafarinina, solitany fandrehitra, mangahazo, katsaka, sns.